यौन सम्बन्धले स्वास्थ्यमा फाइदा गर्छ ? | Nepal123.com
Posted in यौन स्वास्थ्य
यौन सम्बन्धले स्वास्थ्यमा फाइदा गर्छ ?
Author: Prem Lama Published Date: January 27, 2020 LeaveaComment on यौन सम्बन्धले स्वास्थ्यमा फाइदा गर्छ ?
वैवाहिक जीवनमा दम्पतिबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनका लागि यौनले जसरी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ, ठिक त्यसैगरी स्वास्थ तथा सौन्दर्यका लागि पनि यौनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट प्रँप्त निष्कर्ष के छ भने नियमित रुपमा राखिने यौन सम्बन्धले विभिन्न प्रकारका रोग तथा शारीरिक समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । यसले खासगरी तनाव, डिप्रेसन, प्रोस्टेट सम्बन्धि समस्याका साथै मोटोपना तथा आस्टियोपोरोसिस जस्ता समस्यामा नियमित यौन सम्पर्कले सकारात्मक फाइदा पुर्‍याउने विभिन्न अध्ययनहरुले प्रमाणित गरेका छन् ।
यौन सम्पर्कमा शारीरिक स्पर्शको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । हुन त प्रेमी-प्रेमिका हुन् अथवा लामो समयपछि भेटिएका दम्पत्ति नै किन नहुन्, एक झलक पाउने बित्तिकै उनीहरुको शरीरमा रासायनिक प्रक्रिया प्रारम्भ भैसक्छ । त्यसपछि उनीहरुले एक-अर्कालाई गर्ने शारीरिक स्पर्शले उनीहरुलाई आनन्दको उत्कर्षमा पुर्‍याइदिन्छ । हाम्रो दिमागमा एक प्रकारको केमिकल (फेनिलेथाइलेमाइन अथवा पीईए) हुन्छ, एक-अर्काको शारीरिक स्पर्शले मात्र पनि यो केमिकल तीव्र रुपमा श्राव हुन थाल्छ । प्रेमी अथवा श्रीमान् टाढा भएको बेला अथवा मनमुटाव भएको बेला उक्त रसायनको श्राव बन्द हुन्छ । उक्त रसायनका श्राव बन्द भएको बेला शरीरमा एक प्रकारको निराशा तथा थकान हुने पनि अध्ययनले देखाएको छ ।
यौन सम्बन्धमा चुम्बनको भूमिका पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसले दुबैलाई रोमाञ्चित बनाउँछ । विशेषज्ञहरुका अनुसार एक-अर्कालाई चुम्बन गर्दा शरीरमा एपोक्राइन ग्लाडरबाट एक प्रकारको विशेष हार्मोन (रसायन) निस्कन्छ । जसका कारण चुम्बनका क्रममा एक प्रकारको मनमोहक सुगन्ध निस्कन्छन, जसले यूगल जोडीलाई अझ बढि रोमान्टिक बनाउँछ । उक्त हार्मोनले प्रेमी-प्रेमिकाबीचको रोमान्टिक क्ष्ँणलाई अझ रोमान्टिक बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।
यौन सम्पर्कको क्रममा शरीरबाट विभिन्न प्रकारका हार्मोनहरु निस्कन्छन्, जसले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ र सुन्दर बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।
नियमित यौन सम्पर्क राख्नाले आस्टियोपोरोसिस नाम गरेको रोग लाग्दैन । यौन सम्पर्कले एन्डोफिर्न हार्माेनको मात्र बढ्छ, जसले छाला सुन्दर, कोमल तथा चम्किलो बनाउँछ ।
एस्ट्रोजन नामक हार्माेन शरीरका लागि चमत्कारिक मानिन्छ, जसले हामीलाई अनौठो सुखको अनुभूति गराउँछ । नियमित तथा स्वस्थ यौन क्रिया&#2
Tagged यौन स्वास्थ्य
← कीर्ते मुद्दामा प्रदेश सांसदलाई एक वर्ष कैद
वीरगञ्जमा भेटिएको शंकास्पद वस्तु प्रेसर कुकर बम भएको पुष्टि, सेनाद्वारा निष्क्रिय →
Japan To Celebrate May 26 As “Hirotaka Takeuchi 14 of 8000m Mountains Summit Day